ဝိတျကပြွီး ဝမျးမှနျစတေဲ့ ကွံရညျ၏ ကနျြးမာရေးအာနိသငျမြား - Latest Myanmar News
ဝိတျကပြွီး ဝမျးမှနျစတေဲ့ ကွံရညျ၏ ကနျြးမာရေးအာနိသငျမြား
နှရေဲ့သင်ျကတေတဈခုဖွဈတဲ့ ကွံရညျက ဘယျလိုကောငျးကြိုးတှရှေိလဲဆိုတာ သိပါသလား။ မသိသေးရငျပွောပွမယျနျော။ ဆငျလေးတှရေဲ့အဓိကအစားအစာဖွဈတဲ့ ကွံတှဟော လူ့ခန်ဓာကိုယျအတှကျ ဘယျလောကျတောငျ အကြိုးပွုလဲဆိုရငျ…..
ကွံပငျဟာ အဆဈတှေ ပါပွီး ကွံ့ခိုငျတဲ့ အပငျဖွဈပွီး အမွငျ့အားဖွငျ့ ၂-၆ မီတာ လောကျ မွငျ့ပါတယျ။ ကွံရိုးက ရတဲ့ ကွံရညျဟာ မရှိမဖွဈ အာဟာရဓာတျတှေ ပါဝငျတာကွောငျ့ ကနျြးမာရေးနဲ့ အလှနျ ညီညှတျပါတယျ။
ကွံရညျက ခြိုပမေယျ့လညျး ခန်ဓာကိုယျရဲ့ bad cholesterol တှကေို လြော့ကစြတေယျ။ လြော့ကစြတောကလညျး ဝိတျကစြနေိုငျတဲ့ အဓိက အကွောငျးရငျးပဲဖွဈတယျ။ ကွံရညျက အမြှငျဓာတျလညျးပါဝငျပါတယျ။
ကွံရညျက အပူကို နိုငျစပေါတယျ။ ကွံရညျမှာ carbohydrates ၊ proteins ၊ calcium ၊ phosphorus ၊ iron ၊zinc ၊ potassium နဲ့ vitamins A ၊ B-complex နဲ့ C တို့ပါဝငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကွံရညျသောကျခွငျးက ခန်ဓာကိုယျပိနျသှယျစပေါတယျ။
၂. ရဓောတျ ပွညျ့ဝစပေါတယျ
ပူပွငျးတဲ့ ရာသီဒဏျခံရရငျ ဒါမှမဟုတျ ကိုယျလကျ လှုပျရှားမှုကို ကွာကွာ လုပျရငျ ကွံရညျကို သောကျသငျ့ ပါတယျ။ ဒါက ခန်ဓာကိုယျကို ရဓောတျ ပွညျ့ဝစေ ပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ ဆျောဒါလို အခြိုရညျ တှအေစား ကွံရညျကို သောကျသငျ့ ပါတယျ။
ကွံရညျမှာ antioxidants လုံလောကျစှာပါဝငျတာကွောငျ့ ကိုယျခံအားကောငျးစနေိုငျတယျ။ ကွံရညျက ရောဂါပိုးမှားမြားကို တိုကျဖကျြပေးနိုငျတဲ့အပွငျ အသညျး နဲ့ အစာခဖြေကျြအားကိုကောငျးစနေိုငျတယျ။
ကိုယျခံအားကိုကောငျးစတေဲ့အပွငျ ကွံရညျက အနာ ၊ ဒဏျရာတှကေိုပါ မွနျမွနျပြောကျကငျးစနေိုငျတယျ။ ကွံရညျမှာ ကွံသကွားပါတာကွောငျ့လညျး အနာတှကေို အခြိနျခဏလေးနဲ့ ပြောကျကငျးစနေိုငျတာပါ။ ကွံရညျနဲ့ အနာတှကေို လိမျးပေးခွငျးကလညျး သိသာတဲ့ရလဒျကို ရစမှောပါ။
၅. လညျခြောငျးနာတာ သကျသာစတေယျ
လညျခြောငျးယား ၊ ခြောငျးဟနျ့နတေယျဆိုရငျ ကွံရညျကို သံပုရာသီး ညှဈ ၊ ဆားနညျးနညျးထညျ့ ဖြျောသောကျပေးပါ။ ကွံရညျမှာ ပါဝငျနတေဲ့ Vitamin C ဟာ လညျခြောငျးယားပွီး နာတာတှကေို သကျသာစပေါတယျ။
ကွံရညျမှာက antioxidants လုံလောကျစှာပါဝငျတာကွောငျ့ ပိုးမှားတှကေို တိုကျဖကျြပေးနိုငျတယျ။ ရခေဲတော့ထညျ့မသောကျနဲ့ပေါ့နျော။
၆. ဆီးလမျး ကွောငျး ကနျြးမာ စပေါတယျ
ကွံရိုးဟာ ဆီးလမျးကွောငျးကို သနျ့စငျစပွေီး ကြောကျကပျတှကေို လုပျငနျး ဆောငျတာ ကောငျးကောငျး လုပျနိုငျဖို့ ကူညီပါတယျ။
ကွံရိုးဟာ ဂနိုဆီးပူ ညောငျး ကရြောဂါ၊ ဆီးကြိတျ ကွီးတာ၊ ဆီးအိတျ ရောငျတာ တို့ကွောငျ့ ဖွဈတဲ့ ဆီးသှားလို စိတျမြားတဲ့ ဝဒေနာကို သကျသာ စပေါ တယျ။
၇. သကျလုံ ကောငျးစပေါတယျ
ကွံရိုးမှာ ကာဗိုဟိုကျ ဒရိတျပါဝငျမှု မြားတာကွောငျ့ ခန်ဓာကိုယျကို စှမျးအငျ ဖွညျ့ပေးပွီး လနျးဆနျး စပေါတယျ။ ပငျပနျးနတေဲ့ ကွှကျသားတှကေို စှမျးအငျ ခကျြခငျြး ပေးနိုငျပွီး အားကစား သမား တှမှော သကျလုံ ကောငျးစပေါတယျ။
၈. ဝမျးမှနျမှနျ သှားစပေါတယျ
ကွံရိုးမှာ ပိုတကျစီယမျ ပါဝငျမှု မွငျ့မား တာကွောငျ့ အစာကွညေကျစပွေီး ဝမျးနုတျဆေး အပြော့စားလို ထိထိ ရောကျရောကျ အသုံး ဝငျပါတယျ။
ကွံရညျရဲ့အစှမျးကတော့ အံ့မခနျးပါပဲ ။ ကွံရညျက သစေနေိုငျလောကျတဲ့ ရောဂါတှဖွေဈတဲ့ ရငျသားကငျဆာ ၊ ပရော့စတိတျကငျဆာတို့ကို တိုကျဖကျြပေးနိုငျတယျ။ ကွံရညျမှာ ပါတဲ့
flavonoids က ကငျဆာဖွဈစနေိုငျဆဲလျတှကေို ကောငျးကောငျးကွီး လြော့ကသြှားအောငျ တိုကျဖကျြပေးနိုငျတယျ။ ရငျသားကငျဆာ ဖွဈစနေိုငျနှုနျးကိုလညျး လြော့နညျးသှားစတေယျ။
သတိပွုရနျ ကွံရညျကို တဈနနှေ့ဈခှကျထကျ ပိုမသောကျမိပါစနေဲ့။
နွေရဲ့သင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ကြံရည်က ဘယ်လိုကောင်းကျိုးတွေရှိလဲဆိုတာ သိပါသလား။ မသိသေးရင်ပြောပြမယ်နော်။ ဆင်လေးတွေရဲ့အဓိကအစားအစာဖြစ်တဲ့ ကြံတွေဟာ လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ဘယ်လောက်တောင် အကျိုးပြုလဲဆိုရင်…..
ကြံပင်ဟာ အဆစ်တွေ ပါပြီး ကြံ့ခိုင်တဲ့ အပင်ဖြစ်ပြီး အမြင့်အားဖြင့် ၂-၆ မီတာ လောက် မြင့်ပါတယ်။ ကြံရိုးက ရတဲ့ ကြံရည်ဟာ မရှိမဖြစ် အာဟာရဓာတ်တွေ ပါဝင်တာကြောင့် ကျန်းမာရေးနဲ့ အလွန် ညီညွတ်ပါတယ်။
ကြံရည်က ချိုပေမယ့်လည်း ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ bad cholesterol တွေကို လျော့ကျစေတယ်။ လျော့ကျစေတာကလည်း ဝိတ်ကျစေနိုင်တဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်းပဲဖြစ်တယ်။ ကြံရည်က အမျှင်ဓာတ်လည်းပါဝင်ပါတယ်။
ကြံရည်က အပူကို နိုင်စေပါတယ်။ ကြံရည်မှာ carbohydrates ၊ proteins ၊ calcium ၊ phosphorus ၊ iron ၊zinc ၊ potassium နဲ့ vitamins A ၊ B-complex နဲ့ C တို့ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကြံရည်သောက်ခြင်းက ခန္ဓာကိုယ်ပိန်သွယ်စေပါတယ်။
၂. ရေဓာတ် ပြည့်ဝစေပါတယ်
ပူပြင်းတဲ့ ရာသီဒဏ်ခံရရင် ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်လက် လှုပ်ရှားမှုကို ကြာကြာ လုပ်ရင် ကြံရည်ကို သောက်သင့် ပါတယ်။ ဒါက ခန္ဓာကိုယ်ကို ရေဓာတ် ပြည့်ဝစေ ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဆော်ဒါလို အချိုရည် တွေအစား ကြံရည်ကို သောက်သင့် ပါတယ်။
ကြံရည်မှာ antioxidants လုံလောက်စွာပါဝင်တာကြောင့် ကိုယ်ခံအားကောင်းစေနိုင်တယ်။ ကြံရည်က ရောဂါပိုးမွှားများကို တိုက်ဖျက်ပေးနိုင်တဲ့အပြင် အသည်း နဲ့ အစာချေဖျက်အားကိုကောင်းစေနိုင်တယ်။
ကိုယ်ခံအားကိုကောင်းစေတဲ့အပြင် ကြံရည်က အနာ ၊ ဒဏ်ရာတွေကိုပါ မြန်မြန်ပျောက်ကင်းစေနိုင်တယ်။ ကြံရည်မှာ ကြံသကြားပါတာကြောင့်လည်း အနာတွေကို အချိန်ခဏလေးနဲ့ ပျောက်ကင်းစေနိုင်တာပါ။ ကြံရည်နဲ့ အနာတွေကို လိမ်းပေးခြင်းကလည်း သိသာတဲ့ရလဒ်ကို ရစေမှာပါ။
၅. လည်ချောင်းနာတာ သက်သာစေတယ်
လည်ချောင်းယား ၊ ချောင်းဟန့်နေတယ်ဆိုရင် ကြံရည်ကို သံပုရာသီး ညှစ် ၊ ဆားနည်းနည်းထည့် ဖျော်သောက်ပေးပါ။ ကြံရည်မှာ ပါဝင်နေတဲ့ Vitamin C ဟာ လည်ချောင်းယားပြီး နာတာတွေကို သက်သာစေပါတယ်။
ကြံရည်မှာက antioxidants လုံလောက်စွာပါဝင်တာကြောင့် ပိုးမွှားတွေကို တိုက်ဖျက်ပေးနိုင်တယ်။ ရေခဲတော့ထည့်မသောက်နဲ့ပေါ့နော်။
၆. ဆီးလမ်း ကြောင်း ကျန်းမာ စေပါတယ်
ကြံရိုးဟာ ဆီးလမ်းကြောင်းကို သန့်စင်စေပြီး ကျောက်ကပ်တွေကို လုပ်ငန်း ဆောင်တာ ကောင်းကောင်း လုပ်နိုင်ဖို့ ကူညီပါတယ်။
ကြံရိုးဟာ ဂနိုဆီးပူ ညောင်း ကျရောဂါ၊ ဆီးကျိတ် ကြီးတာ၊ ဆီးအိတ် ရောင်တာ တို့ကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ဆီးသွားလို စိတ်များတဲ့ ဝေဒနာကို သက်သာ စေပါ တယ်။
၇. သက်လုံ ကောင်းစေပါတယ်
ကြံရိုးမှာ ကာဗိုဟိုက် ဒရိတ်ပါဝင်မှု များတာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ကို စွမ်းအင် ဖြည့်ပေးပြီး လန်းဆန်း စေပါတယ်။ ပင်ပန်းနေတဲ့ ကြွက်သားတွေကို စွမ်းအင် ချက်ချင်း ပေးနိုင်ပြီး အားကစား သမား တွေမှာ သက်လုံ ကောင်းစေပါတယ်။
၈. ဝမ်းမှန်မှန် သွားစေပါတယ်
ကြံရိုးမှာ ပိုတက်စီယမ် ပါဝင်မှု မြင့်မား တာကြောင့် အစာကြေညက်စေပြီး ဝမ်းနုတ်ဆေး အပျော့စားလို ထိထိ ရောက်ရောက် အသုံး ဝင်ပါတယ်။
ကြံရည်ရဲ့အစွမ်းကတော့ အံ့မခန်းပါပဲ ။ ကြံရည်က သေစေနိုင်လောက်တဲ့ ရောဂါတွေဖြစ်တဲ့ ရင်သားကင်ဆာ ၊ ပရော့စတိတ်ကင်ဆာတို့ကို တိုက်ဖျက်ပေးနိုင်တယ်။ ကြံရည်မှာ ပါတဲ့
flavonoids က ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်ဆဲလ်တွေကို ကောင်းကောင်းကြီး လျော့ကျသွားအောင် တိုက်ဖျက်ပေးနိုင်တယ်။ ရင်သားကင်ဆာ ဖြစ်စေနိုင်နှုန်းကိုလည်း လျော့နည်းသွားစေတယ်။
သတိပြုရန် ကြံရည်ကို တစ်နေ့နှစ်ခွက်ထက် ပိုမသောက်မိပါစေနဲ့။
Categories ကျန်းမာရေးသုတ Tags ကွံရညျ Post navigation
ဒီလို နရောတှမှော မှဲ့ ရှိတယျဆိုရငျ သငျဟာ အလှနျ ကံကောငျးသူတဈယောကျပါ